Andriamifidisoa Zo · Novambra 2008 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Novambra, 2008
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Novambra, 2008
Amerika Latina 30 Novambra 2008
Karajia (Tchat) mivantana momba ny VIH/SIDA amin'ny 3 desambra
Kenyà 30 Novambra 2008
Manomana karajia (Tchat) mivantana ho an'ny mpamaham-bolongana sy ny mpikatroka ny Rising Voices sy ny Global Voices amin'ny 3 Desambra 2008 ho avy izao (3 ota tolakandro ora ao Nairobi sy eto Madagasikara koa) ka ny lohahevitra amin'izany dia mikasika ny fomba ampiasana ny “media citoyen” na ny azon'ny olo-tsotra...
Isiraely: vaovao farany momba ireo takalon'aina jiosy any Mumbai
India 28 Novambra 2008
Tsy dia fantatra loatra hatramin'izao ny manjo ireo takalon'aina nandritra ny fanafihana ny Ivotoerana Jiosy Chabad ao Mumbai. Chabad moa dia iray amin'ireo antokom-pinoana jiosy Hasidika Ôrthôdôksa mipariaka indrindra. Ny vaovao tena farany indrindra re mikasika ireo takalon'aina jiosy dimy voatazona tao moa dia ny fahafatesan'izy ireo, hoy i Gilad Lotan. Vakio ary ny fandehan'ny raharaha.
India: Ny fanafihan'ny mpampihorohoro ao Mumbai
Hita taratra mazava any amin'ny tontolon'ny bolongana ny hatezerana mihatra amin'ny fantsom-baovao amin'ny fomba fitantarany ny fanafihan'ny mpampihorohoro an'i Mumbai. Ho an'ny sasany, dia naka ny paikan'ny “shock and shake” na “mandona sy manontsana” ny mpitati-baovao be mpanaraka izay mifanohitra amin'ny manamarina ny fisian'ny vaovao vao manambara ny fisiany. Saingy...
Mumbai: May ny Taj Hotel
Misy ny maneho ny sary nopihany amin'ny flickr sy any amin'ny toeran-kafa ankoatra izay asehon'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Sary maro dia maro ohatra no asehon'i Arun Shanbhag amintsika ka hatramin'ny ra mandriaka, ny diantsaoka [fanaon'ny polisy amaritana ny paozin'ny olona niharandoza na tavela] ka hatramin'ny fahamaizan'ny Taj Hotel. Azonao jerena ato...
Senegal 26 Novambra 2008
Indro mijoro eo anilan'ny filoha Wade ao amin'ny lapam-panjakana ilay mpandraharaha Senegaly sady Filoha Tale Jeneralin'ny vondrom-barotra Bara Mboup (CCbm), Atoa Serigne Mboup, nilaza ny tsiri-keviny omaly hampiasa vola mahatratra 34 arivo arivo arivo Cfa (US$ 666 arivo arivo) hanomezana asa vaovao mahatratra 60 000 amin'ny fanafarana posy-bisikileta ampolo arivony...
Nikaragoà: Nivelatra noho ny fiaraha-miasa ny tontolom-bolongana
Amerika Latina 25 Novambra 2008
Nihanivelatra tao ho ao ny tontolom-bolongana Nikaragoana ary isaorana noho izany ny mpamaham-bolongna samihafa sy ireo mpampiasa ny Twitter. Indro ny resadresaka fohifohy niarahana tamin'i Alvaro Berroteran ilay nisantatra tetikasa iray antsoina hoe Nicaragua y Su Blog izay nanandratra ny bolongana Nikaragoana. Niara-niasa tamin'ny hafa kosa aloha izy tamin'ny fananganana bolongana iraisan'olona maromaro sy nametraka vondrona Facebook vaovao.
Madagasikara: Nanakorotantsaina ny fifanarahan-tany tamin'ny Koerana tatsimo.
Madagasikara 24 Novambra 2008
Raha inoana ny nolazain'ny Financial Times dia hanofa ny atsasaky ny tany azo volena eto Madagasikara ny Koreana Tatsimo. Niteraka adihevitra teo amin'ny tontolom-bolongana malagasy mikasika ny fiandrianam-pirenena sy ny fampandrosoana ara-toe-karena izany. Mbola tsy mazava moa hatramin'izao hoe efa nosoniavin'ny roa tonta ve ny fifanarahana? Na izany aza dia efa ifandresen-dahatra eo amin'ny mpamaham-bolongana raha azo heverina ho karazana "fanjanahantany vaovao" izao fifanarahana izao.
Shina: Raharaha maizina vaovao mikasika ny Baidu
Shina 22 Novambra 2008
Notaterin'ny CCTV ary fa nanaiky nandray vola avy tamina orinasa mpanao fanafody tsy ara-dalàna mba hametrahana ny rohy mikasika azy ho voalohan-daharana rehefa manao fikarohana amin'ny aterineto ny Baidu, izay heverina ho Google Shinoa. Nolazaina tao anatin'izany fitateram-baovao izany fa mahalala izany toe-javatra izany ny mpiasa misahana ny dokambarotra ao...
Bolivia: resaka fitsaram-bahoaka
Amerika Latina 21 Novambra 2008
Niteraka savorovoro nanerana an'i Bolivia manontolo ny firoboroboan'ny famonoana olona na fikasana hamono olona voampanga ho nandika lalàna tsy mandalo fitsarana. Nitranga tany amin'ny faritry Altiplano tao Achacachi tamin'ny 17 novambra 2008 lasa teo ny tranga farany izay nalaza tamin'ny haino aman-jery [es]. Olona 11 lahy sy vavy no nampangain'ny...